लामागाउँ बिजनबारीका ज्ञानेन्द्र सुब्बा बने डा. ज्ञानेन्द्र सुब्बा - खबरम्यागजिन
Homeखबरलामागाउँ बिजनबारीका ज्ञानेन्द्र सुब्बा बने डा. ज्ञानेन्द्र सुब्बा
September 8, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
लामागाउँ बिजनबारीका ज्ञानेन्द्र सुब्बाले विद्यावारिधि पूरा गरेर डा. ज्ञानेन्द्र सुब्बा बन्न सफल बनेका छन्।
उनले सन् 2012 मा उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयबाट शोधकार्य थालेको बताएका छन्। ‘दार्जिलिङ-पुलबजार खण्डमा पाइने लोकवार्ताको विश्लेषणात्मक अध्ययन’ विषयमा उनले विद्यावारिधि गरेका हुन्। उनको शोध निर्देशक प्रोफेसर डा. घनश्याम नेपाल थिए।
दुई दिन अगाडि डिफेन्स भाइबा बसेपछि डा. सुब्बाले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पक्रिया समाप्त भएको बताएका छन्।
डा. सुब्बाले सिक्किम विश्वविद्यालय, उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नल लगायत धेरै जर्नलहरूमा लोकवार्ता विषयमा शोधपत्र पनि प्रकाशित गरेका छन्।
डा. सुब्बाले केही साल अगाडि पोखरा नेपालमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठीमा लोकवार्ता विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
उनी हाल गोरूबथान सरकारी महाविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका छन्। साहित्यमा ज्ञानेन्द्र यक्सो नामले चिनिने उनी आजको समयको चर्चित कवि पनि हुन्। उनको कविता सङ्ग्रह ‘दाहिने बाटो’ प्रकाशित छ। उनी हाल चर्चामा आइरहेको समावेशी लेखनको एक अभियन्ता पनि हुन्।
‘धेरै वर्षदेखि निरन्तर परिश्रम गरेवापत हिज आफ्नो शोधकार्य( Ph.D) विधिवत रूपमा पूर्ण गरेको हर्ष प्रिय मित्र साथै आदरणीय आफन्तजनमा बाँड्न चहान्छु। यस श्रमसाध्य कार्यमा मलाई दिशा निर्देश गर्नुहुने मेरा शोध निर्देशक ( Research supervisor) आदरणीय प्रोफेसर डा. घनश्याम नेपालप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु । उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालय नेपाली विभागका आदरणीय गुरुजन, मेरा शुभ-चिन्तक साहित्यिक मित्रगण, अग्रज तथा सहकर्मी एवम् मेरा प्राक्तन सर गुरामाहरूलाई सययोग, हौसला र आर्शीवादका निम्ति अनेक धन्यवाद । शोधका क्रममा क्षेत्र कार्य (Field survey) गर्दा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शोध सहयोगी (Data Informant)- हरूमा सादर सम्झना । मेरा परिवारका हरेक सदस्यहरूले गरेका / दिएका सहयोग र आत्मविश्वासले पनि यो कार्य सिद्ध हुनसकेको हो। विशेष सहयोगका निम्ति दाजु डा वासुदेव पुलामी र प्रिय भाइ सपन प्रधानप्रति कृतज्ञ छु । यो कार्य सिद्ध गर्न लामो समयदेखि परिश्रमरत थिएँ । आज पूर्ण गर्न सकेँ ।सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद’, डा. ज्ञानेन्द्रले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्।